Buy Trenavar vovoka (4642-95-9) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Ny hafa / Trenavar poids (4642-95-9)
SKU: 4642-95-9. Sokajy: Ny hafa
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra azo avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny seranana Trenavar (4642-95-9), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Trenavar vovoka dia fantatra amin'ny anarana hoe Estra-4,9,11-triene-3,17-dione, sy Trendione ary dia 10 imbetsaka kokoa noho ny Testosterone. Trenavar dia ohatry ny prohormone izay mifantoka amin'ny 17b-HSD1 mba hamoronana Trenbolone mavitrika, izay midika hoe indray mandeha ao amin'ny vatanao Trenavar dia niova ho Trenbolone na Tren.
Vokatry ny vovo-dronono Trenavar
Trenavar vovoka ireo karazana fototra
Name: Trenavar vovoka
Meny fitetezana 258.36
Color: Vovon-tsakafon'ny fotsy hoditra mena na mavo
Trenavar vaky volo
Famaritana anarana: Estra-4,9,11-triene-3,17-dione
Anarana hafa: Trendione, Trenabol, Tren Elite, T-Var 15 sy Super Trenabol.RU-2065, Trenava rpowder, Trendione
Ny vovoka Trenavar dia fantatra amin'ny anarana hoe Estra-4,9,11-triene-3,17-dione, ary koa Trendione ary dia 10 imbetsaka kokoa noho ny Testosterone. Trenavar ny vovony menaka dia prohormone izay mifantoka amin'ny 17b-HSD1 mba hamoronana Trenbolone mavitrika, izay midika indray mandeha ao amin'ny vatanao Trenavar vovoka mena mivadika ho Trenbolone aka Tren. Ny mpampiasa voly Trenavar dia mahatsapa fitomboana betsaka amin'ny fitomboan'ny hery sy ny masony. Ny mpampiasa koa dia mahatsapa fihenan-tsakafo maivana ary mitombo ny fihenanam-bolo. Ny vovo-drivotra Trenavar dia nitombo be ny isan'ny lazaina sy ny fangatahana noho ny vokatra matanjaka ao anatin'ireo faribolan'ny karana. Tena ny tsara indrindra amin'ny tontolon'ny roa tonta no mandinika ny habetsahan'ny vola azonao sy ny fahaverezan'ny tavy.
Trenavar ny vovony menaka, fantatra amin'ny anarana hoe Trendione, dia ohatry ny prohormony am-bava izay tsy mitovy amin'ny kentone steroïdre dia misy amin'ny ketôn amin'ny toerana 17th. Noho izany dia miteraka tranbolona mivaingana ao amin'ny vatana izy io, ka mahatonga azy io ho singa mahery sy mahery vaika. Satria izy dia mitovy amin'ny rafitra ho an'ny tranobolônôly, ankoatra ny sarak'ilay fiaramanidina (izay matetika vokatry ny tsy mety mampidira ny fiarandalamby ho lasa), ny mpampiasa dia tokony hahazo valiny tena mitovy amin'ny fampiasana tranbolone.
Ity prohormone ity dia haingana be dia be ny fandraisan'ny mpampiasa azy fa afaka mahita vokatra izy ireo aorian'ny 7 ka hatramin'ny 10 andro aorian'ny doka voalohany amin'ny serfa Trenavar. Na izany aza, ny hany voka-dratsiny dia ny vovony mena nohon'ny Trenavar dia mety hampihena ny habetsaham-paharetanao amin'ny ankapobeny, izay mety hahatonga anao ho sarotra ho anao amin'ny farany raha mbola azonao atao rehefa mampiasa fitsaboana cardio ianao.
Ankehitriny raha heverina ho ohatran'ny prohormone ny seranana Trenavar, dia mizara tarehimarika mitovy amin'izany izy miaraka amin'ny Trenbolone, steroïdeo iray misoroka izay nahazo mpanaraka marobe tao amin'ny tontolo bodybuilding. Ny manasaraka ny roa amin'izy ireo dia ny hoe ny kôtônany irery ihany no teo aloha tamin'ny toeran'ny 17th niala ny farany tao amin'ireo rafitra simika.
Inona ny dingan'ny serfa Trenavar
Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mihazakazaka manodidina ny 30 mankany 45mg amin'ny serfa Trenavar isan'andro mandritra ny andro 30 miaraka amin'ny fanohanana ny bisikileta. Tsara kokoa ny mizara io dosage ambony io eo amin'ny 2 amin'ny 3 ny fandefasana 15mg isan'andro.
Voalohany, tokony hampidirina ao amin'ny 50-70 milligrams (mg) isan'andro ny dinganina rehefa mihazakazaka irery, ary raha toa ka tsy misy ny fiantraikany, dia mety hahatratra hatramin'ny 100mg ny dosage. Tsy ilaina ny mihoatra an'io dosage io, ary tsy tokony hihazakazaka mihoatra noho ny 5 na ny herinandro 6.
Raha ampiasaina ho toy ny ampahan-doka iray, dia soso-kevitra ny hampiasanao trendone hanombohana ny tsingerina, ary ny ampahany kely amin'ny 20-50mg isaky ny andro maromaro. Mpisera marobe no misafidy ny haka equipoise, testosterone, na primobolan miaraka aminy. Ankoatra izany, ny sasany amin'ireo mpampiasa sasany dia nisafidy ny hampiova ny trendione amin'ny deca durabolin, nefa tadidio fa ny fikolokoloana roa progestins dia tokony hataon'ny mpampiasa efa za-draharaha.
Rehefa mampiasa sombin-tany voalohany, dia tokony hihazakazaka solo amin'ny doka farafaharatsiny mba hijerena ny fihetsikao.
Ny fomba fiasan'ny Trenavar
Trenavar ny vovony menaka dia mikendry mikendry ny 17b-HSD1 ary avy eo dia manadio ny votoatina amin'ny fiovam-po ao amin'ny vatanao mankany trenbolone. Trenbolone sy Trenavar dia tena mitovy, raha ny marina dia mizara ny fifamatorana mitovy amin'ny 3 miaraka aminy. Ny varotra roapolo trenavar dia miavaka amin'ny ketone 17. Vokatr'izany, ny mpampiasa dia mahatsapa ny vokatra mitovy amin'ny azy amin'ny alalan'ny fihazakazahan'ny faribolan'ny faribola.
Ny mpampiasa dia mitaky fitomboana haingana eo amin'ny ampahefany sy ny heriny manerana ny solaitrabe, miaraka amin'ny fanombohana manomboka amin'ny 7-10 andro aorian'ny doka voalohany. Aorian'ny herinandro 4-6, ny ankamaroan'ireo mpampiasa manao fampiofanana matanjaka dia hilaza fa tena akaiky na mihoatra izy ireo, ny rakitsoratry ny tenany manokana eo amin'ny fiakarany. Ankoatr'izay dia mitatitra ihany koa ny hozak'izy ireo izy ireo, manjavozavo masiaka mandritra ny fampiofanana azy ireo, ary ny vascularity bebe kokoa.
Raha momba ny endrika fiaretana amin'ny fampiofanana, dia safidy ratsy ny trendange, satria manimba ny tanjonao miaritra.
Ankoatra ireo tombontsoa mitovy amin'izany, ireo mpandoro biby ihany koa dia mandeha ho an'ny vovoka Trenavar noho ny fialany amin'ny dinganina. Eritrereto izany. Nahoana ianao no mamakivaky ny hatezerana rehefa azonao atao ny maka tahaka an'izany? Azo ampiasaina ho ohatry ny prohormone ihany koa izy io na ampahany amin'ny doka.
Ity prohormone ity no hany fitaovana voaporofo fa niova ho Trenbolone rehefa nohazavaina tamin'ny vatany. Amin'izao fotoana izao, raha betsaka ny "clones" mena "Trenavar" vitsivitsy azonao aleha, dia miaina ao anaty datolone izy ireo, izay mihabetsaka kokoa raha ampitahaina.
Ny vovobony Trenavar dia tena maro be ary matetika ampiasaina amin'ny bodybuilders mandritra ny fanomanana ny fifaninanana sy ny vanim-potoana. Maro ireo mpampiasa za-draharaha amin'ity tatitra momba ny prohormone ity fa ity fitambaran-javatra ity dia manana ny fahaizana tsy mitazona fotsiny, fa miforiporitra koa amin'ny ampahany fanampiny mandritra ireo fotoana ireo rehefa miaraka amin'ny sakafo tsy misy kaloria.
Ankoatra izany, ny vovony menaka dia tsy mivadika ao amin'ny estrogen ary tsy hampisy fiantraikany amin'ny fiantraikany amin'ny rivotra. Na dia izany aza dia mbola zava-dehibe ny tsy maintsy hahazoana fitsaboana ara-pahasalamana araka ny tokony ho izy na PCT mandeha aorian'ny fiaramanidina miaraka amin'ity prohormonina ity mba hialana amin'ny vokany ratsy hafa.
Amin'izao fotoana izao raha mbola tsy miverina amin'ny estrogen ny vovony roapolo Trenavar ary tsy hampisy fiantraikany eo amin'ny ejipsiana, dia tena zava-dehibe ny hahazoana fitsaboana ara-pahasalamana manokana na PCT mandeha aorian'ny fiakaran'ny diany miaraka amin'ity prohormone ity. Koa satria ny herin'ny serfa Trenavar dia mahery vaika, mila PCT ianao mba hanampy ny taovanao amin'ny alàlan'ny fanitsiana ity prohormonina ity ary hampiroborobo ny fahasalaman'ny hormone.
Hoentina amin'ny ho avy.RU-2065
Misy fiantraikany eo amin'ny sehatra ve ny vovobony Trenavar
Tahaka ny tsingerin'ny prohormone, ny mpampiasa dia mahita ny fitomboan'ny tsiranoka sy ny kolesterola avo lozam-pandrefesana amin'ny fiaramanidina Trenavar. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia mihena ny tosidra avo lenta rehefa tapitra ny tsingerina ary ny vokatr'io ateraka io dia azo ampifandanjaina amin'ny tokony ho izy amin'ny fanohanana ny bisikileta sy ny Post Cycle Therapy. Ny vovobony Trenavar dia mety hampitombo ny herisetra ary hampihenana ny libido mandritra ny fotoana voafetra. Vaovao tsara dia ny tsy fisian'ny menaka varahina amin'i Trenavar izay midika fa tsy hivadika any Estrogen izany. Noho izany dia tsy mila miahiahy momba ny fampandrosoana an'i Gyno aka Man boobs ianao.
Ny vovobony Trenavar dia hampidina ny haavon'ny tiroida amin'ny ankapobeny izay mahatonga ny famokarana Prolactin. Ny famokarana Prolactine loatra dia mety hitarika ho amin'ny fahatsapana, ny hafetsena, ary ny fametahana ao amin'ny faritra mitomandavana. Mba hisorohana ireny karazana fihary ireny, ampiasaina ny prolactine manakana anao mandritra ny tsingerinao toy ny Inhibit-P amin'ny SNS na Prolactrone amin'ny Black Lion Research.
Ireo izay mahazatra ny "Tren Cough" dia tsy tokony hiahiahy momba an'io rehefa mamakivaky vovony mena ny volotsangana Trenavar satria izany dia vokatry ny injectables ihany. Tsy olana intsony ny vokatra vokatra vita amin'ny varimbazaha avy any Trenavar.
Ny siramamy Trenavar koa dia ohatry ny prohormone tsy methylated izay midika fa tsy dia mafy loatra amin'ny vatana, na izany aza, tsy midika izany fa tsy tokony handray fiakaram-pandeha ianao. Ny fanohanana ny familiana dia ilaina amin'ny sariohatra prohormone rehetra.
Etsy ankilany, ny vokatra hafa dia mitatitra avy amin'ireo mpampiasa izay efa nandeha bisikileta miaraka amin'ny vovony mena:
Mitombo ny herisetra
Mety hiteraka aretina sy reraka eo amin'ny tongony
Mitombo ny herin'ny tiroida
Mety hiteraka siramamy ao amin'ny siramamy ao amin'ny ra
Afaka manangana prolactine
Mampihena ny fiaretana
Mety hiteraka fifangaroan'ny kolesterola ratsy sy ny tosidra
Afaka mamindra fo sy fo
Mety miteraka aretim-po, fatotra ary lethargy
Na dia misy ny kaonty sasany manasongadina ny vovobony Trenavar dia mety miteraka "Hodi-doha", tsy zavatra azonao atao ny mampiasa izany prohormone izany. Azonao atao ny miaina toy izany amin'ny fampiasana ihany koa ny Trenbolone injectable
Ahoana no hividianana vovoka Trenavar avy any AASraw
Trenavar ronono dipoavatra
Manadihady ny solontenan'ny mpanjifantsika (CSR) ho an'ny antsipiriany, ho an'ny antsipiriany
Parabolan (Tren Hex) vovoka
Methenolone Acetate (Primobolan) poids